स्थायी कमिटी बैठक : एमसीसी प्रस्तावमाथि लिलामणिको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ - Everest Dainik - News from Nepal
स्थायी कमिटी बैठक : एमसीसी प्रस्तावमाथि लिलामणिको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
काठमाडौं : नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले एमसीसीबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको प्रस्तावमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् ।
आजको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष्यद्वयले एमसीसी परियोजना देशहितमा संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा पोखरेलले नोट अफ डिसेन्ट राखेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस रातारात दशगजामा बाँध बनाउँदै भारत
‘एमसीसी आफैंमा विभिन्‍न उद्देश्यले आएको हो । मूल सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेर अमेरिकी पक्षले भनिसक्यो । मूल सम्झौतामै संशोधन हुँदैन भने कसरी हित अनुकूल संशोधन हुन्छ त?’ पोखरेलले बैठकमा उठाएका थिए ।
एमसीसी आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) ०को अंग भएको बताउँदै आएका पोखरेल बैठकमा पनि त्यही कुरामा उभिएका थिए । ‘आईपीएस अमेरिकाको ग्लोबल पोलिटिक्स र सुरक्षा सञ्चालन गर्नेसँग सम्बन्धित छ । नीति र गठबन्धन हो । त्यसो हुँदा नेपालको हकमा मात्रै संशोधन होला त? नेपाल मात्रै त्यससँग सम्बन्धित छैन भन्ला त?’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो लागि अमेरिकाले आफ्नो ग्लोबल पोलिसी नै परिवर्तन गर्ला त?’
याे पनि पढ्नुस सकियो ओली–प्रचण्डको छलफल, के भयो सहमति ?
ट्याग्स: नेकपा, नोट अफ डिसेन्ट, लिलामणि पोखरेल